सालिन्दा दुई सयजना सपार्दै दसौं हजारलाई बिगार्ने गोर्खा भर्ती – Tesro Ankha
सालिन्दा दुई सयजना सपार्दै दसौं हजारलाई बिगार्ने गोर्खा भर्ती
संवत् २०३६ (सन् १९७९) मा धरान घोपा क्याम्पबाट भर्ती भएँ । १० जीआरमा परें । १५ वर्ष नोकरी गरेर सन् १९९२ सालमा नेपाल फर्कें । त्यसपछि केही समयका लागि बु्रनाई जीआरयुमा गएँ तर त्यहाँ धेरै रहिनँ । त्यहाँ ठूलो अभियान ग¥यौं । त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन आफ्नो हक र अधिकारका लागि गर्यौं । गोर्खालीमाथिको विभेदविरुद्ध हामी उठ्यौं र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्यौं । त्यसपछि म नेपाल फर्किएँ ।
बु्रनाईमा यही अभियानका कारण हामीलाई फर्काउन खोेजेका थिए । ‘किडन्याप’ गरेर हवाईजहाजबाट ल्याएका थिए । तर, हाम्रो ठूलो शक्तिले त्यसरी सजिलै फर्काउन दिएन । हेडक्वार्टर नै कब्जा गरेर हाम्रा साथीहरूले हामीलाई फर्काउनुभयो । संसारको इतिहासमा ठूलो कामचाहिँ सर्भिसमै भएको लेफ्टिनेन्ट कर्णेललाई हामीले निलम्वन गरायौं । हामीले जित्यौं । ‘सिभिल वार’ थियो भने हाम्रो हातमा सत्ताकब्जा भएको थियो ।
बु्रनाई सरकारको राजा सुल्तानले कर्णेल स्कर्टसनलाई हाम्रै आँखाअगाडि पदमुक्त गराए । त्यो हाम्रो जित थियो । हाम्रा धेरै माग स्थापित गरायौं । अहिले हाम्रा साथीहरूले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छन् । सेवा र सुविधा पनि पाइरहेका छन् । त्यतिबेला हामीलाई सेक्युरिटी गार्डका रूपमा लगिन्थ्यो । तर, त्यहाँचाहिँ रेगुलर आर्मीका रूपमा खटाइन्थ्यो । जुन अवैधानिक थियो । हामी सेक्युरिटीमा गएपछि सेक्युरिटी गार्डकै रूपमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । त्यहीभित्र अन्य थुप्रै माग पनि थिए । त्यसपश्चात् म नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु ।
हाम्रो हातमा राख्न आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्छ भनेर हामीले ०५७ मा संस्था स्थापना गर्यौं । यो गोर्खाजमात्र रहेको सम्भवतः पहिलो वित्तीय संस्था हो । किनभने यहाँ (गोर्खा–गोर्खा मिलिनियम) भित्र ९९.९ प्रतिशत सबै गोर्खाज छन् । बाँकी ०.१ प्रतिशत प्राविधिक कारणले मात्र हो ।
देशमा धनी मानिस धेरै छन् । भारतबाट लोटा लिएर पसेकाले देशकै अर्थतन्त्र हाँकिरहेका छन् । तर, यो देशको भूमिपुत्र भनेर छाती फुलाउनेहरू माग्ने स्थितिमा पुगेकोमात्र होइन, मागिरहेका छौं । अझै यसरी नै गयौं भने यस्तै हुन्छौं । कमाउँछौं तर स्थिति दिनप्रतिदिन बिगार्दै छौं । त्यसैले अब धेरै बिग्रन हुँदैन भनेर आर्थिक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित भयौं ।
बेलायत पुग्दा सानो सर्भेजस्तो गरें । त्यहाँ बुझ्दा एकाध साथीले एउटा गोर्खाजसँग घर नकिनीकन बसेको छ भने करिब ३० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति छ । अर्बौं रुपैयाँ भए पनि देशको अवस्थाले गर्दा चाहेर पनि नेपाल पठाउन सकेका छैनन् । हामीले आदिवासी जनजाति हितका लागि कुरा गर्दा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रका विद्वान्ले हामीलाई किन गाइडेड गरेन ? कुनै समयमा हामीलाई ‘गाइडेन्स’ गर्ने मान्छे भएको भए काठमाडौं भ्याली नै हाम्रो हातमा हुन्थ्यो । हामी आज कुन स्थितिमा पुग्थ्यौं ? आज हामी सेकेन्ड र थर्ड करियर भनेर जानुपर्दैनथ्यो । विडम्बना गाइडेन्स अभाव भयो । हामी अनुत्पादक क्षेत्रमा लाग्यौं । किनभने एकतले आवश्यक भए पनि हामी तीनतले घर बनाउनमा लाग्यौं । यदि एकतले घर बनाएर काठमाडौंमा दुई तीन रोपनी जग्गा किनेको भए आज करोडौं रुपैयाँको हुन्थ्यो । त्यो गाइडेन्सको अभावले हो । त्यसैले हामी केही बुझेकाले नयाँलाई डोर्याउनैपर्छ । नयाँ पुस्ताको गालीबाट बाहिरिन हामी काम गरिरहेका छौं ।
अहिले हामीले ‘ग्रामर स्कुल’ सञ्चालन गरेका छौं । त्यहाँ करिब ७ सय विद्यार्थी छन् भने १०५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गोर्खा मिलेनियम सहकारीमा २७ जना रोजगारीमा छन् । यो पनि त ठूलै उपलब्धि हो । यस्तो कुरा हामीले बुझाउँदै लैजानुपर्छ । हामी अब यही माध्यमबाट हाइड्रोपावरमा जाँदै छौं । पीपीए पनि प्राप्त गरिसकेका छौं । त्यहाँभित्रबाट मानिसलाई हुलेर त्यो साइडबाट उद्योगपति बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन् । हामी खालि कमाउनेमात्रै लागेका छौं । हामीले जीवनभरि कमाएकाले भन्दा एउटा पुलिसको हवल्दारले हाम्रोभन्दा ठूलो घर बनाएका छन् । खै त ? हाम्रो कमाइ । सेकेन्ड करियर भन्दै विदेश गइरहेका छौं । छोराछोरीका लागि भनेर बिदेसिइएका छौं । हामीले त कमायौं कि गुमायौं यो पनि सही विश्लेषण गर्न सकेका छैनौं । तर, व्यक्तिगत हिसाबमा भन्दा धेरै ठूलो कुरा गुमाइरहेका छौं ।
२०७४ फाल्गुन १९ १४:१४